Abavelisi beesekethe zeTshayina kunye nabathengisi | UJunwei
Ijunwei yevolthi ephantsi yabathengi umahluko wesekethe kunye nekhefu lesekethe, ixabiso eliluhlaza okwesibhakabhaka 3-36 KVA:
Sika kwaye usike isixhobo sonke
-Thintela ukugcwala kakhulu kunye nesekethe emfutshane.
-Ukusetwa kwesayizi ukunciphisa amandla ekhontrakthi ye-ERDF
-Ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bakhuselwe kunxibelelwano olungathanga ngqo kunye nokuthintela umngcipheko womlilo ngokubeka iliso kwinqanaba lokuzahlula.
Umahluko okhethiweyo uvumela ukukhetha okupheleleyo ukuya ezantsi kwe-30 Ma isixhobo esahlukileyo (NF C 15-100) kwaye sonyusa ukungakhuseleki kuphazamiseko olubangelwa ngumoya okanye ezinye izinto (ukubangela ngengozi)
Itekhnoloji yezixhobo zokukhusela:
Umgcini wesekethe wesebe le-ERDF unemisebenzi yokhuselo emininzi
Ukukhuselwa kwe-overvoltage kufezekiswa ngemagnethi "ngebhodi yedash" ye-oleo trigger.
Umgca wangoku oza kulawulwa uqukuqela ngokusebenzisa i-coil ye-magnetic, kunye nexesha elifunekayo (kuxhomekeke kumandla) lifunyanwa ngokuhambisa isiseko se-magnetic kumbhobho oqukethe ioyile ene-viscosity ezimeleyo kubushushu.
-Ukukhuselwa komhlaba ngoku kukhuselwa kufezekiswa ngumahlulo wentsalela ekhoyo ngoku.
Ukuvuza okukhoyo ngoku komhlaba kufunyenwe sisixa somthamo wenqanaba langoku kunye nokungathathi hlangothi kwangoku kokubhijela okuphambili kwesiguquli sangoku. Umsesane wesekondari okwangoku unikezela amandla ovakalelo oluphezulu lokuhambisa ngokwahlulahlula.
Kwimowudi yokhetho eyahlukileyo, uhambo lokwahlula-hlula lulibaziseka ngabom ngokufaka i-RC yokudityaniswa kwekhadi lokulibaziseka ngekhadi elinamandla okuqokelelana kwamandla phakathi kwecala lesekondari kunye nolwahlulo olwahlukileyo.
-Umatshini osebenzayo wendlela yolawulo sisixhobo sokuhamba simahla esinezikhundla ezibini zokutshintsha ezinziweyo eziphawulwe ziimpawu mna no-o.
Isigaba se-infrared caliper yangoku sinokuhlengahlengiswa ngokuhambisa isikisi esingashukumiyo, esinokufikeleleka kwindawo yokugcina ngaphambili. Le cache igcina kuphela inani elihambelana nocwangciso olukhethiweyo.
Ngokutywina i-calibration buffer, unokukhubaza ukuphazamiseka kuseto.
Icandelo lokwahlulahlula linokuvavanywa yisekethe enokuthi iqhutywe liqhosha elingaphambili kwaye libhalwe "uvavanyo".
Okulandelayo: Isiqalo seMoto
JVM10 Uhlobo olutsha lwangoku olunokuhlengahlengiswa ...
Izixhobo ezincinci zesekethe
I kZ Isaphulelo seSekethe yoMaphuli / MCCB